Funny Movie sameeyey, Abuur Video Funny ah ee Minutes
> Resource > Video > Sida loo abuuro Funny Videos
Markii aad maqasho erayada "video tafatirka", laga yaabaa inaad ka fekerto shaqo adag taas oo lug ku leh saacadood software iyo kharashka aad u adag in hore computer ka qabashada. Dhab ahaantii, video tafatirka sidaas ma aha, caajis haddii aad doorato a video editor funny. Dhab ahaantii, waxa ay sidoo kale noqon kartaa mid xiiso leh oo fudud!
Hal dhibic oo bilaw fiican gacmaha cagaaran waa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ). Waa xal dhamaystiran loo sameeyo sawir iyo video movie xiiso. Sidaa daraadeed, waxa aad codsan kartaa boggiisa kala guurka / qoraalka, ku dar cod-badan funny, geliso clipart sixir ah, dalban saamayn fool-off xun, animation samayn qabow, iyo in ka badan. Hoos waxaan ku tusi doonaa sida si ay u abuuraan a video kaamil ah funny for uploading in YouTube in daqiiqo.
Download iyo rakibi this gaare filim qosol sida nidaamka hawl gal, ka dibna raac hoos ku tallaabo hagitaan talaabo talaabo. Ogsoonow in hagahan uu ku salaysan yahay version Windows, laakiin version Mac dhow ka shaqeeya isku mid.
Burcad barnaamijkan inay galaan suuqa kala hoose. Skip ka kaaftoomi doono barashada software adag, guji "Import" in ay ku shuban aad video, audio ama image files. The files keeno muuqan doonaa sida thumbnails in shayga saxaarad bidix, si aad u hesho fududahay in video aad u baahan tahay mar kasta helaan. Marka dhammaan faylasha ku raran yihiin, jiita iyaga oo hoos u Timeline u dhigma oo u diyaar ah in ay soo saaraan filim guriga cajiib ah ugu dhaqsaha badan.
2 Abuur xiiso videos oo dhan qalab ku anfacaya
Marka files warbaahinta oo dhan u soo galeen meel, muujiyo video clip ah oo ku saabsan Timeline ah, oo la taabto la dhan video ah & qalab laga sii wanaajiyo audio bixiyo.
Itusi aasaasiga ah: Ka hor inta qodaya oo dhan fikrado funny, waxaa laga yaabaa in aad marka hore u baahan tahay in si wadajir ah isu geeyo dhowr videos, jar ka soo qayb aan loo baahnayn, ku dar music soo jeeda cadaalad-faraxa, waxa ay isku shaandheyn 90 darajo, ama sameeyo qaar ka mid ah la saxo midabka. Si arrintan loo sameeyo, waxay isticmaalaan submenu saxda ah ama guddi tafatirka si aad u fudud oo dhaqso loo gaaro.
Picture-in-sawir: Habeynta dhowr video clips wada jir ah inaad u sheegto threads dheeraad ah oo sheekada waa waxa ay dadka inta badan qaataan samaynta funny videos. Markaasaa waxaa taas wada funny video gaare ka dhigaysa mid sahlan taas loo sameeyo. Riix tab PIP kor ku Timeline, waxaad dooran kartaa template aad jeceshahay ka badan oo khayraadka iyo waxa ka codsan in mid ka mid click. Sidoo kale, in aad waqtiga PIP u soo jiidi kartaa adiga kuu gaar ah funny sawir / image iyo astaysto mowqifkeeda iyo ciyaaro muddo.
Voiceover Record ama bedelo maqal ah ee video: Si aad video qosol, qoraalana voiceover ah cod funny iyo qalaad caadi ahaan loo baahan yahay. Si tan loo sameeyo, si fudud ku dhuftay button rikoor ay u bilaabaan duubista voiceover la tayo wanaagsan leh. Markaas, aad bedesho cod , ciyaaro xawaare si ay u gaaraan in ka badan. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad carrab karaa / saarto track asalka audio iyo bedesho adiga kuu gaar ah cod-badan.
Codso saamaynta cajiib ah: Waxaa jira badan oo foom oo ka mid ah barnaamijkan in aad isticmaali karto si dhakhso leh u jeedi photos caadiga ah iyo video clips galay qurux badan oo xiiso leh videos. Guji "Text", "Saamaynta", "guur", ama "Sound" kor ku xusan Jadwalka iyo codsan saamayn aad doonayso inaad sida baraf cad, dab, cabaad, qososho, iyo in ka badan in ay meesha aad rabto in aad by fudud jiitaa-n-dhibic.
Qalabka tafatirka More xiiso leh: Tani xiiso video editor sidoo kale "Power Tool" shaqo oo kaa caawin kara in aad abuurto saamayn la yaab leh iyada oo aan wax dadaal ah. The "Power Tool" waxa loola jeedaa set oo ah qalab qabow, oo ay ku jiraan " Janjeeri-wareeg "," Muuse "," Waji-off ", iyo" jarid bood "(version Windows oo keliya). Kuwani qalab xirfadeed ayaa si dhif ah arkay in xataa codsiyada video tafatirka ugu qaalisan.
3 Save iyo wadaagno video funny
Marka qanacsan yihiin natiijada kama dambaysta ah ee degaanka Xiisaha Leh, wadaagno video isla by hit "Abuur". In uu furmo suuqa wax soo saarka, ku dhowaad dhammaan online iyo fursadaha qaybsiga offline waxaa la siiyaa, si waaban si ay u muujiyaan aad video funny hadda.
Waa mid aad u farxad ah in la abuuro video YouTube ama filin guriga la this video editor xiiso leh, sax? No arrinta aad rabto in aad ku dartaa naftaada ama wax ka bedel qaar ka mid doqon ah videos si ay ula wadaagaan kuwa aad jeceshahay, kaliya isku day!
Daawo Videos on Qalabka telefoonada gacanta (macruufka & Android)
Sida loo Play YouTube Videos offline - on PC, Mac iyo kombuyuutarrada gacanta
Hel Software Best Video ayeey bilowga ah